Dhalasho Wacan Mr.Prefectionist Aamir Khan Iyo Taariikh Nololeedkisa Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro) – Filimside.net
March 14, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: March 14, 2018
Bollywood Mega Star Aamir Khan (Mr. Perfectionist) ayaa maanta u dabaal dagayo sanad guuradiisa 53-aad wuxuuna xidigaan dhashay 14-ka Maarso 1965.
Hadaba munaasabada dhalashada Aamir Khan awgeed waxaan Update ku sameenay taariikh nololeedkiisa maqaal ka hadlaayo oo aan hada ka hor soo daabacnay.
Fadlan hoos kaga bogo macluumaad walbo oo Aamir Khan ku saabsan waxaana kuu soo diyaarisay shabakada kowaad ee arimaha Aflaanta ka hadasho Afka Soomaaligana wax ku qorto (Filimside):
Super Star Aamir Khan magaciisa dhabta ah waa Mohammed Aamir Hussain Khan wuxuuna dhashay 14-kii Maarso sanadii 1965.
Aamir waa atoore Hindi ah, Director, qarash gareeye sidoo kalena soo bandhigo barnaamijyada TV-yada ka baxaan.
Khan inta uu fanka ku jiray wuxuu ku guuleestay inuu ka mid noqdo shaqsiyaadka ugu saameynta badan fanka Hindiya wuxuuna ku guuleestay abaal marino badan oo ay ka mid yihiin 4-National Film Awards, 7-Filmfare Awards, sidoo kalena dawlada Hindiya waxay sasiisay labada bilad ee muwaadinka maqaamka sare dalka ku leh la siiyo Padma Shri (2003) iyo Padma Bhushan (2010).
Aamir Khan oo ku caan baxay Mr. Perfectionist waa jilaa aan filimo badan sameynin balse dhigay rikooro taariikhi ah dhanka Boxoffice-ka waana atooraha kaliya ee marwalbo rikoor cusub Bollywood-ka kusoo kordhiyo dhanka filimada.
Aamir Khan Iyo Bilawgii Noloshiisa Iyo Asal Raaca Noloshiisa:
Aamir wuxuu ku dhashay magaalada Mumbai 14-kii Maarso 1965 waxaa aabo u ah Tahir Hussein oo ahaa filim qarash gareeya halka hooyadiis lagu magacaaabo Zeenat Hussein.
Aamir Khan qarabaadiisa ayaa siweyn fanka ugu lug lahaa adeerkiis Nasir Hussein waa filim sameeye iyo qarash gareeye halka filisofar-ka weyn Abul Kalam Azad ayay ayeydiisa is xigeen.
Aamir Khan waa curudka qoys afar qof ka koobnaa walaalkiis waxaa lagu magacaabaa Faizal Khan halka labada gabdhooda ee la dhasheen lagu kala magacaabo Farhat iyo Nikhat Khan sidoo kale Aamir wuxuu abti u yahay Imran Khan oo haatan filimada wax ka jilo.
Aamir asigoo aad u dhalin yar ayuu Bollywood-ka u leg yeeshay waayo markii uu 8-jir ahaa wuxuu muuqaalo ku yeeshay filimkii Yaadon Ki Baaraat (1973) waxaana filimkan iska lahaa adeerkiis Nasir Hussein sidoo kalena Aamir hees caan ah oo filimkan ku jirto ayuu wax ka qaadayaa.
Isla sanadkii xigay sanadii 1974 Aamir wuxuu matalay doorka Mahendra Sandhu oo wiilyar ah filimkii Madhosh ee aabihiis qarash gareeyaha ka ahaa.
Khan kadib wuxuu galay Iskuulka J.B. Peti si uu waxbarashadiisa hoose u dhameesto kadibna wuxuu ku biiray St. Anne’s High School ee ku yaalo Bandra wuxuuna ku dhameestay ilaa fasalkiisa 8-aad sidoo kalena wuxu fasalada 9-aad iyo 10-aad ku dhameestay Bombay Scottish School ee ku yaalo xaafada Mahim.
Aamir Khan wuxuu cayaari jiray Tennis-ka asigoo tartamada Iskuulada ka qayb gali jiray waxaana la sheegay in xifrada cayaartiisa ay wanaagsan marka loo bar bar dhigo sida uu waxbarashada ku ahaa.
Nasiib wanaag fasalka 12-aad wuxuu ku dhameestay Narsee Monjee College ee ku yaalo magaalada Mumbai kadib juhdi badan ee uu xidigan bixiyay.
Aamir Khan ayaa noloshii yaraantiisa ku tilmaamay mid aad u dhib badneed madaama aabihiis dhibaato dhaqaale ku habsatay madaama filimadii uu qarash gareeyay intooda badan ay guul dareestaan.
Aamir oo arinkan ka hadlaayo wuxu yiri “Maalin walbo 30-taleefon ayaa lasoo diri jiray waxayna ahaayeen dad deymo ku lahaa aabo sidoo kalena rabeen in lacagahooda la siiyo”
Aamir ayaa si dhib badan wax barashada ku dhameestay madaama marwalbo lacagaha iskuulka la weydiin jiray mararka qaarna iskuulka laga racadeeni jiray lacag la’aan awgeed!!
Aamir asigoo 16-sano jiro wuxuu ka qayb qaatay filim tijaabo ahaa wuxuuna soconaayay 40-daqiiqo waxaana la dhahaa Paranoia waxaana filmkan kooban sameeyay saaxiibkiis oo ay isku iskool ahaan jireen Aditya Bhattacharya.
Waxaana filimkan maal galiyay film sameeyaha caanka ahaa xiligaas Shirram Lagoo wuxuuna siiyay xoogaa kumanaan Rupees ah.
Khan waalidkiisa ayaa ka hor imaadeen inuu filim jilista ku biiro madaama ay iyaga dhibaato dhaqaalo kala kulmeen waxayna rabeen in wiilkooda Ingineer ama Dhaqtar midkood uu noqdo.
Sidaa darteed sidii uu rabay uma uusan jilin filimkii Paranoia balse Aamir ayaa sheegay in filimkan uu waaya aragnimo ka helay kuna dhiiri galiyay inuu fanka meel sare ka gaaro.
Khan si dhaqsi ah wuxuu ugu biiray koox tiyaatarada bandhig ka sameyso ee lagu magacaabo Avantar wuxuuna ka tirsanaa mudo sanad ah kadibna ruwaayado kooban ayuu wax ka jilay.
Khan markii uu waxbarashada sare dhameestay wuxuu go’aan ku gaaray inuu gabi ahaanba waxbarashada joojiyo inkastoo waalidkiisa ay ka hor imaadeen.
Wuxuuna xidigan caawinaad ka helay adeerkiis Nasir Hussein asigoo Director caawiye kaga dhigay labadiisii filim Manzil Manzil (1984) iyo Zabardast (1985).
Aamir Khan Iyo Sida Uu Ku Noqday Atoore Buuxo:
Kadib markii uu adeerkiis labo filim kala shaqeeyay sidoo kalena wuxuu wax ka jilay filim Documentary ah waxaana sameeyeen ardayda iskuulka FTII eek u yaalo magaalada Pune.
Filim sameeye Ketan Mehta aya arkay doorkii uu ka qaatay Aamir Khan filimka Documentay-ga ah oo ardayda sameeyeen wuxuuna Aamir usoo jeediyay inuu door ku yeesho filimkiisa jeceylka ah Holi (1984).
Filimka Holi jilaayaal badan oo fanka ku cusub ayaa wax ka jileen balse filimkan ma guuleesanin sidoo kalena Aamir Khan lagama siinin door muuqdo.
Balse adeerkiis Nasir Hussein iyo wiilka uu dhalay Mansoor Khan ayaa kalsooni ku qabeen kartida Aamir Khan waxayna atoore kowaad kaga dhigeen filimka Qayamat Se Qayamat Tak (1988) sidoo kalena Juhi Chawla ayaa la jishay.
Filimkan Mansoor Khan ayaa Director ka ahaa waana markii ugu horeesay ee uu filim sameeyo waxaana sheeko ahaan laga soo min guuriyay ruwaayada William Shakespeare ee Romeo and Julliet.
Qayamat Se Qayamat Tak (1988) wuxuu noqday film caalami ah oo guul taariikhi ah gaaro sidoo kalena Aamir Khan iyo Juhi Chawla waxay noqdeen labo xidig oo cirka galaan waxaana filimkan lagu qaatay 7-abaal marin oo Filmfare Awards ah waxaana Khan lagu siiyay abaal marinta jilaaga ku cusub fanka midka ugu wanaagsan sanadii 1989.
Qayamat Se Qayamat Tak (1988) ilaa haatan waa filim Classic ah oo aan marnaba la iloobi karin sidoo kalen qalbiga shacab weynaha Hindiya siweyn u dhex dagay.
Sanadii 1989 Aamir waxaa usoo baxay filimka Raakh ee ka hadlaayo dhibaatada dambiyada waxaana sameeyay Aditya Bhattacharya waa wiilkii Aamir ay isku iskoolka ahaan jireen.
Rakh waxaa la duubay ka hor inta aan Qayamat Se Qayamat Tak la sameynin inkastoo filimkan uu guul dareestay hadana sheeko ahaan siweyn ayaa loo amaanay wuxuuna Khan ku muteestay abaal marinta National Film Awards weliba bilad qaas ah ayay gudiga siiyeen madaama jilinkiisa lala cajabay (National Film Award – Special Jury Award).
Isla dhamaadkii sanadii 1989 Aamir iyo Juhi aya ku midoobeen filimkoodii labaad Love Love Love balse filimkan siweyn ayaa loogu qasaaray.
Sanadii 1990 Aamir waxaa usoo baxeen 5-filim balse filimada kala ah Awwal Number, Tum Mere Ho, Deewana Mujh Sa Nahin iyo Jawani Zindabad dhamaantooda waxay ka noqdeen kuwo guul dareesteen (Flop).
Balse filimkiisa Dil ee uu iska lahaa Indra Kumar sidoo kalena Madhuri Dixit la jishay Aamir Khan ayaa noqday Blockbuster weyn sidoo kalena filimka labaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay sanadkaas.
Kadibna waxaa u xigay filimkii guusha dhex dhexaadka ahaa gaaray Dil Hai Ke Manta Nahin (1991) waxaana la waday Pooja Bhatt waxaana filimkan sheeko ahaan laga soo min guuriyay filimka Hollywood-ka ah ee lagu magacaabo It Happened One Night (1934).
Wixii markaas ka dambeeyay wuxuu bilaabay inuu wajiyo kala duwan tijaabiyo sidoo kalena filimada uu amaanta ku muteestay guulahana u gaareen waxaa ka mid ah Jo Jeeta Wohi Sikandar (1992), Hum Hain Rahi Pyar Ke (1993) iyo Rangeela (1995) oo weliba Blockbuster weyn noqday.
Sidoo kalena sanadii 1994 waxaa usoo baxay filimkii Andaz Apna Apna ee Salman Khan isa jileen inkastoo bilawgii hore filimkan Flop noqday hadana gadaal wuxuu ka helay aqoonsi caalami ah wuxuuna noqday filim Classic ah.
Aamir Khan Iyo Guushiisii Ugu Weyneed Markii Uu Gaaray:
Wuxuu si rasmi ah u hirgaliyay siyaasada ah inuu sanad walbo hal filim ama labo filim sameeyo waxayana ahayd arin Bollywood-ka ku cusub.
Xidigan sanadii 1996 wuxuu la yimid filimkii Raja Hindustani ee Dharmesh Darsan sameeyay waxaana la jishay Karishma Kapoor.
Filimkan ayaa noqday All Time Blockbuster sidoo kalena wuxuu noqday filimkii ugu weynaa ee uu Khan sameeyo sanadii 1996 filimkiisa ayaa noqday midkii ugu weynaa.
Khan filimkan markii ugu horeesay ayuu atooraha sanadka ee shirkada Filmfare bixiso ku qaatay asigoo 7-jeer ee uu horey u tartamay ku guuleesanin.
Wixii markaas ka dambeeyay Khan maqaam sare ayuu gaaray wuxuuna bilaabay inuu lacago badan ku shaqeeyo.
Sidoo kale filimadiisii xigeen Ishq (1997), Ghulam (1998) iyo Sarfarosh (1999) waxay noqdeen Hit dhameestiran sidoo kalena wuxuu galay marxalad ah inuu sameeyo marwalbo filimada Hit-ka ah.
Khan amaan ayuu ku muteestay filimkii Earth ee Deepa Mehta iska laheyd inkastoo uu Disaster ahaa balse qarniga cusbaa 2000 Khan wuxuu ku bilaawday filimkii Mela isagana wuxuu noqday mid guul dareestay waxaana la jilay walaalkiis ka yar Faisal Khan.
Sanadii 2001 Aamir Khan darajo aan la gaari karin ayuu ku talaabsaday madama filimkiisii Lagaan uu guul taariikhi ah gaaray sidoo kalena filimkan aqoonsi caalami ah ayuu helay.
Khan filimkan abaal marinta Filmfare Awards ayuu mar labaad ku qaatay sidoo kalena filimkiisa wuxuu kaalin fiican ka gaara Oscar-ka Hollyood-ka madaama sheekadiisa siweyn loo amaanay.
Dhamadkii sanadii 2001 Aamir Khan wuxuu sameeya filimkii Dil Chahta Hai wuxuuna gaaray guul iska dhex dhexaad ah.
Aamir Khan mudo 4-sano ah ayuu Bollywood-ka ka maqnaa wuxuuna dib usoo laabtay sanadii 2005 asigoo la yimid filimkii uu halgamaaga ku matalay Mangal Pandey: The Rising balse filimkan hamigii laga qabay ma uusan gaarin wuxuuna noqday filim guul dareestay (Flop) ah inkastoo uu mudo dheer hawada ka maqnaa.
Laakiin sanadii 2006 ayuu Khan wacdaro lala yaabay dhigay waxayna u ahayd markii ugu horeesay ee uu hal sano labo filim oo Hit dhameestiran uu sameeyo Fanaa oo Super Hit noqday iyo Rang De Basanti oo isagana Hit noqday.
Doorkii uu filimka Rang De Basanti ku jilay amaan badan ayuu ku muteestay sidoo kalena shirkada Filmfare Awards waxay ku siisay abaal marinta (Filmfare Critics Award for Best Actor).
Khan sanadii 2007 waji cusub ayuu la yimid madaama uu Director ka noqday filimkii uu wax ka jilay Taare Zameen Par wuxuuna filimkan gaaray guul weyn asigoo noqday Super Hit, sidoo kalena abaal marino kala duwan ayuu ku qaatay.
Aamir Khan Iyo Marka Uu Bilaabay Sameynta Filimada Blockbuster-ka Ah Iyo Rikoorada Cusub:
Sanadii 2008 Khan wuxuu noqday aabaha Bollywood-ka madaama filimkiisii Ghajini uu rikoor cusub dhigay filimkan ayaa noqday filimkii ugu horeeyay ee 100 Crore gudaha Hindiya kasoo xareeyo sidoo kalena Blockbuster weyn ayuu noqday.
Khan dadka oo la yaabanaa wacdarihii uu dhigay sanadii 2008 ayuu markale sanadii 2009 sameeyay rikoor taariikhi ah madaama filimkiisii 3 Idiots uu noqday filimkii ugu horeeyay ee 200 Crore gudaha Hindiya kasoo xareeyo wuxuu noqday All Time Blockbuster.
Sidoo kalena filimka 3 Idiots wuxuu noqday mid caalami ah asigoo daafaha caalamka kasoo xareeyay in ka badan $25M.
Khan mudo labo sano ka badan ma uusan sameynin filim uu ku leeyahay door dhameestiran wuxuuna la yimid markii dambe filimkii Talaash ee iska laheyd Reema Kagti balse filimkan guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray.
Aamir Khan sanadii 2013 ayuu Bollywood-ka siweyn uga yaabsaday madaama filimkiisii Dhoom 3 uu dhigay rikoor taariikhi ah wuxuuna soo xareeyay 262 Crore asigoo noqday All Time Blockbuster iyo filimka lacagaha ugu badan soo xareeyo oo ay ebid Bollywood-ka sameeyaan.
Sidoo kalena guud ahaan daafaha caalamka iyo gudaha Hinidya wuxuu kasoo xareeyya filimkan $89M!!
Khan wuxuu caadeestay inuu marwalbo rikoor cusub dhigo sidaa darteed sanadii 2014 wuxuu dhigay rikoor laga wada naxay loona dhawaan karin.
Waayo filimkiisa PK ayaa gudaha Hindiya kasoo xareeyay 337 Crore ilaa haatana waa laga yaaban yahay arinkan sidoo kalena filimkan ilaa haatan wuxuu daafaha caalamka kasoo xareeyya $44M halka gudaha iyo dibada markii la isku daro uu sare u dhaaftay lacagtiisa $125M!!!
Aamir Khan 2016 ayuuba kasii daray wuxuuna markale cadeeyay inuusan jirin atoore la tartami karo dhanka iskoor sameynta wuxuuna la yimid filimkiisii weynaa Dangal.
Dangal wuxuu noqday taariikhda filimka Hindiya sameeyeen midkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyay asigoo PK iskoorka kala wareegay wuxuuna keenay 375 Crore qaybta Af Hindiga lagu daawaday oo kaliya.
Sidoo kalena filimkaan daafaha caalamka $30M ayuu ka keenay waana filimka kaliya ee hal waji lacagahaas ku keenay waayo filimada ka lacag badan PK iyo Dhoom 3 waji labaad ayaa suuqyada bariga fog sida China, Hong Kong iyo Japan la saaray markii ay ka dageen suuqyada filimada Hindiya sida joogtada ah looga daawado.
Sidoo kale Aamir Khan filimka Dangal wuxuu ku qaatay atooraha ugu wanaagsan oo ay shirkada Filmfare Awards bixiso waana markii sedexaad ee uu abaal marintaan ku guuleesanaayo.
Aamir Khan sanadkii hore 2017 waxaa usoo baxay filmkii uu qarash gareyaha ka aha sido kalena muuqaal la fidiyay uu kulahaa Secret Superstar filmkaan waxaa hogaamineysay Zaira Wasim waana atirishada filmka Dangal kujirtay waxuuna filmkaan gaaray guul dhex dhexaad ah maadama uu Average noqday.
Balse sanadkan 2018 ayuu la imaan doonaa mashruuc weyn oo laga doodayo inuu 400 Crore keeni karo waana filimka Thugs of Hinduston oo ay isla jilayaan Amitabh Bachchan halka shirkada Yash Raj Films ay iska leedahay waxaana la daawan doonaa Diwali 2018.
Aamir Khan Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Aamir aabihiis Tahir Hussain wuxuu geeriyooday 2-dii Febraayo 2015, sidoo kalena xidigaan hooyadiisa Zeenat wuxuu geeyay Xaj-ka sanadii 2013 si ay waajibaad diini ah usoo gutaan, weliba sawiro ayaa laga soo bandhigay Aamir iyo hooyadiisa oo Xaram-ka joogaan.
Super Star Aamir Khan asigoo aad u dhalin yar waxay jecel wadaageen kadibna ay si qarsoodi ah isku mehersadeen Reena.
Labadan lamaane waxay isku dhaleen wiil iyo gabar lagu kala magacaabo Junaid Khan iyo Ira Khan balse nasiib xumo mudo dheer oo ay isla noolaayeen December 9, 2002 ayay si rasmi ah u kala tageen Aamir iyo xaaskiisii Reena.
Aamir Khan sanadii 2005 noloshiis waxaa kusoo biirtay Kiran Rao oo ay mudo badan arimaha fanka ka wada shaqeeyeen.
Labadan lamaane mudo 10-sano ah ayay haatan wada nool yihiin waxaana u joogo wiil lagu magacaabo Azaad Rao Khan.
Aamir Khan dhanka shaqada fanka wuxuu saaxiibo aad u dhow kala noqday Salman Khan, Juhi Chawla iyo Rani Mukerje wuxuuna sedexdan xidig u hayaa xushmad weyn iyo wada shaqeyn hufan marwalbo.
Aamir Khan sanadkii hore ayuu si rasmi ah shaaca uga qaaday inuu ka tanaasulay cunista hilibka noocyadiisa kala duwan wuxuuna noqday qof qudaarta kaliya cuno asigoo sheegay inuu xaaskiisa kaga dayday midaas madaama caafimaad badan laga helo cunista qudrada oo kaliya.
Waxaa Aqrisay 2,144